ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရရှိငွေများကို ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ခ? - Yangon Media Group
”ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တော့ ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုပြု လုပ်တိုင်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေဂိတ် မှာစောင့်နေကြရတယ်။ ဒါဖြစ်သင့် လား။ ကျွန်တော်တို့က နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဆွေးနွေးတယ်။ ပြည် ထောင်စုအဆင့် ချက်ချင်းတင်ပြ ပေးပြီး အကြောင်းပြန်မယ်ပြော တယ်။ ပါချုပ်အနေနဲ့ ပြည်ထောင် စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက် အပြီးမှာ ပြန်လာလို့ မေးမြန်းတဲ့ အခါ ဘာမှပြန်လည်အကြောင်း ကြားခြင်းမရှိလို့ အခုလိုလှုပ်ရှား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကလည်း အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုပြန် ကြားချက်မရမချင်း နေ့စဉ်ပြုလုပ် သွားမှာပါ”ဟု ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသ)များအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်သီဟ ရဲကျော်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ ရတ နာပုံတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်ထံ တွေ့ ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ရာ ကျောင်းတာ ဝန်ရှိသူများက ”ပါချုပ်ကြီးအနေ နဲ့ ကျောင်းသားလက်ခံနေတဲ့အ ချိန်ဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း၊ ပါ မောက္ခ/ဌာနမှူးအပြောင်းအရွှေ့ တွေကြောင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိ သေးပါဘူး။ မေးမြန်းချင်တဲ့အ ကြောင်းအရာကို ကြိုတင်ရေးပြီး တော့ အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့တောင်း ရင်ရနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေ ကြားသည်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်း သားများသမဂ္ဂ (ဗကသ)အဖွဲ့သည် ဆိုင်ကယ်အပ်နှံမှုမှရရှိသောလေ လံငွေကို ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ပြန်လည်အသုံးပြု ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ သဘောထား ကောက်ခံမှုကိုရယူခဲ့ရာ ကျောင်း သားကျောင်းသူနဲ့ ဆရာဆရာမဦး ရေ ၂၅ဝဝဝ ကျော်အနက် ၂ဝဝဝဝ လောက်က ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်လာပြင်ပပေါက်ဈေး ကျပ် ၅ဝ ခန့် ပြုတ်ကျ၊ အမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းလ??